जनावरहरूको लाल बुक। रूस rarest जनावर
वर्तमानमा, प्रकृति कारण एक नम्बर को लागि जोखिममा छ। पहिले, त्यहाँ सधैं अर्को प्रदूषण को संभावना छ। विभिन्न वर्ण को पर्यावरण प्रकोप, अधिक पृथ्वीको बासिन्दाहरू मँडरा। दोश्रो, कभी-परिवर्तन जलवायु वातावरण लागि प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गर्छ। जो जीवन को गुणस्तर मात्र मानिसहरूलाई, तर पनि जनावर deteriorates किनभने तपाईं धेरै कारण सूची गर्न सक्नुहुन्छ। यस कारण, तिनीहरूले संख्या कम वा प्रजाति रूपमा लोप बन्न सक्छ।
विलुप्त को कारण
प्रजाति को यस्तो ठूलो संख्या खतरा अन्तर्गत किन छ? किन रातो जनावरहरूको बुक सिर्जना गरिएको थियो? त्यहाँ धेरै भिन्न छन्। यस कारण हुन सक्छ biotic कारक। यी पशुहरू लगियो कार्यहरू समावेश गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, प्रजनन प्रजाति को अनियन्त्रित वृद्धि वैकल्पिक, को शिकारीहरु मा एक निष्पक्ष प्रभाव यो जीवन परिवर्तन र जनावरहरूको संख्या असर गर्न सक्छ स्तर वा। अन्य महत्वपूर्ण कारक एक abiotic समावेश गर्नुपर्छ। यो सबै माथि, जलवायु परिवर्तन र जनावरहरूको वासस्थानमा अवस्था। anthropogenic - र, को पाठ्यक्रम, यो असम्भव हाम्रो समय को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक ध्यान आकर्षित गर्न छैन। यो, को पाठ्यक्रम, मानिस आफूलाई को कार्यहरू। आखिर, हामी प्रभाव immeasurably र सधैं सकारात्मक प्रकृति मा छ।
लाल बुक सिर्जना
प्रकृति संरक्षण र पशु प्रजाति को महत्व साकार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ आफ्नै हातमा अग्रसर लिए। 1949 को सुरुमा, यो दुर्लभ प्रजाति लागि जिम्मेवार एक आयोग बनाइयो। र 60 वर्ष मा पशु को पहिलो लाल बुक जारी थियो। यो के प्रतिनिधित्व गर्छ? सबै को पहिलो, यसको मुख्य कार्य कि विलुप्त को कगार मा झनै दुर्लभ प्रजाति को सूची बनाउन थियो। प्रत्येक पशु लागि सँगैको रेखाचित्र र अमूर्त, जीवन, प्राकृतिक निवास, खाना छोटकरीमा वर्णन, र प्रजाति को लापता कारण। यसबाहेक, जनावर समूह विभाजित छन्। लाल बुक मा के जनावर हो? यो, को पाठ्यक्रम, स्तनधारी, amphibians, सरीसृप, माछा, कीरा, र यति मा। डी धारा स्तनधारी सबैभन्दा ठूलो। तिनीहरूले बारी मा, cloven-hoofed जनावर, equines, मुसा, मांसाहारी, चमेरो र धेरै अन्य विभाजित छन्।
रूस को लाल बुक बाट पशु
रूस - एक विशाल देश, धनी मात्र यसको लागि प्राकृतिक स्रोतहरू, तर पनि यसको विशाल क्षेत्रहरूमा बस्ने पशु प्रजाति को एक किसिम। तिनीहरूले प्राकृतिक र अप्राकृतिक उन्मूलन गर्न subjected थियो भने गरिएको यो अनौठो हुनेछ। त्यसैले, रूस को लाल बुक बाट जनावर आफ्नो संख्या र विविधताको थिच्नुहोस्।
तपाईं एक "शीर्ष तीन", रूस मा सबै भन्दा प्रसिद्ध लोपुन्मुख जाती बताइरहेका सिर्जना गर्न सक्छ भने, यो कुनै ठूलो सम्झौता हुनेछ।
लाल बुक। पशु सूची
रूसी पुस्तकमा अग्रणी स्थिति पक्कै पनि साबित भएको Amur बाघ। सुदूर पूर्व बस्ने यो predator, 1930 मा विलुप्त को कगार मा थियो। त्यसपछि टाइगर्स मात्र 20-30 व्यक्तिहरूलाई थिए। स्थिति परिवर्तन गर्न सक्रिय कदम थाले। जनावरहरूको प्रतिबन्धित शिकार। तसर्थ, 1950 को टाइगर्स को वर्ष , त्यहाँ पहिले नै अब, हाल अनुमान अनुसार, तिनीहरूले छ धेरै 100 रूपमा थिए बारेमा 400. जहाँ मानव गतिविधि न्यूनतम कम छ ती ठाउँमा यी पशुहरू र संख्या को सबैभन्दा भेट्यो मृग जो predator को मुख्य खाना रूपमा सेवा र जंगली बँदेल, त्यसको विपरीत, यो पर्याप्त ठूलो छ। सूची विशाल छ जनावरहरूको लाल बुक, यसलाई व्यापक बन्दैछ। निस्सन्देह, सबै को सबै भन्दा poachers को गतिविधिहरु एक बाघ को जीवित को मानक कम गर्छ। तिनीहरूले तिनीहरूलाई injunctions र कैद को खतरा भए तापनि, तल शिकार जारी। यी मानिसहरू पैसा को पछि लाग्नुलाई मा केहि को डर छैन। तिनीहरूले चीन र अन्य एसियाली देशहरूमा छाला बेच्न।
जसको संख्या निरन्तर घट्दै छ अर्को पशु, - यो ध्रुवीय भालु छ। लाल बुक को केही जनावर, जो को खुलासा निरन्तर, हाम्रो देश यति मूल्यवान अद्यावधिक गरिएको छ। ध्रुवीय भालू धेरै ठाउँमा बाँचिरहेका छौं। त्यसैले, तिनीहरूले तट मा, ग्रीनल्याण्ड हो को Barents सागर, को Chukotka। तदनुसार, एक विशेष वासस्थानमा क्षेत्र स्वामित्वको जनसंख्यामा आफ्नो शेयर को क्षेत्र संग। आफ्नो नम्बर को बहुमत लगातार सबै ठाउँमा कम रहनेछ। कारण के हो? कम जन्म दर र उच्च पप मृत्यु को प्राकृतिक कारक भालू को संख्या मा एक कमी गर्न जान्छ। साथै, आर्कटिक जलवायु परिवर्तनको खाना आधार मा एक प्रभाव छ। र पाठ्यक्रम, मान्छे मात्र अन्तिम अवस्था हत्या छाप द्वारा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि आफूलाई ज्ञात लक्ष्य मा poaching सहन नष्ट।
रूस गर्न सबैभन्दा मूल्यवान चरा को एक - यो एक steppe चीललाई छ। कुनै आश्चर्य उहाँले गीतहरू र Tales समर्पण सुंदरता र स्वतन्त्रता गाउन। उत्तरार्द्ध को anthropogenic कारक द्वारा सीमित छ। सुरु कुमारी माटो पाराले जोतेर भएकोले चरा संख्या नाटकीय घट्यो छ। तिनीहरूले agrocenoses मा जीवन गाह्रो छाँटकाँट गर्न पाउन। युवा चीलले शक्ति रेखाहरू द्वारा हत्या गर्दै हुनुहुन्छ। खाना को स्टक (gophers) र निरन्तर फरक हुन्छ। चरा (पुरानो मा सामान्यतया आफ्नो निर्माण गर्ने गुँड haystacks), अक्सर गल्ति जलाए। यो सबै चीलले को आकार सामान्य भयो भन्ने तथ्यलाई मदत गर्दैन। जनावरहरूको लाल बुक रूस युरोपेली भाग मा, तिनीहरूले कुनै थप 19,000 भन्दा जोडी छ भन्ने संकेत गर्छ। यो एक धेरै कम आंकडा छ। यो ठाउँ र poaching लाग्छ। शिकार र चरा को अवैध निर्यात लामो प्रतिबन्ध गरेको छ हुनत, यो अपराधीहरूलाई रोक्न छैन।
जनावरहरूको हाम्रो उमेर मा अग्निपरीक्षाहरू परे। तिनीहरूले मानिसको सिर्जना नयाँ वातावरणमा बाँच्न छ। रातो किताब जनावर पत्ता लगाउन र फरक बनाउन जोखिममा छन् भनेर प्रजाति समाधान गर्न मद्दत गर्छ।
Jungar ढोकाहरू: को जलवायु, को रोचक तथ्य को लम्बाइ
को भैंसिहरु कहाँ छन्? के महादेशमा, के देश मा?
Mocking - बर्ड प्रतिभाशाली
एक तुफान के हो? आंधी गठन गरिएको छ? रूपमा
Osteospermum - बढ्दो र हेरविचार
प्रार्य गठन Viper: यो संवाद गर्न आवश्यक छैन कोसँग शत्रु
वर्णन, मूल्यांकन र प्रतिक्रिया: भवनहरु र संरचना को निरीक्षण लागि थर्मल imagers निर्माण
अमेरिकी लडाकु केविन Rendelman: रोग, जीवनी र सबै भन्दा राम्रो झगडे
हीरा अनुहार क्लेंसिंग: प्रक्रिया कस्तो
सबै भन्दा राम्रो ठाउँ माछा मार्ने लागि - ताल Zaisan
चुरोट Sobranie - एक ठोस इतिहास संग ब्रान्ड परिष्कृत
दोस्रो जन्म: आमा समीक्षाएँ। पहिलो सजिलो दोस्रो प्रसब?
मद्दतको हातबाट बाहिर निस्कनुहोस्
पृथ्वीको हावा लिफाफेको नाम के हो? संरचना, भौतिक गुण र वातावरण को रचना
दबाइ "Prostatinol": प्रयोग र प्रतिक्रियाको लागि निर्देशन
कसरी आफ्नो हात संग पर्दे हेम गर्न: तल्लो किनारा व्यवहार
गणित मा पुरानो समूहमा गतिविधि खुला: बच्चाहरु को लागि अमूर्त, गणित खेल